सर्वहारा रक्सी - Fitkauli
’हामी हात न खुट्टाबिनाका मुर्कुट्टाकार रक्सीहरू, जबर्जस्ती मान्छेका मुखमा पसेका हौं र ? कि हामी फ्याक्ट्रीबाट पाइपद्वारा सिधै तिमीहरूका भुँडीमा घुसेका हौं ?’
’यो पियोर नेपाली भट्टी हो । यहाँ हामी दुईजना छौं, रक्सीको गिलास र म । म कुर्सीमा वसेको छु । म अगाडिको टेबुलमा गिलासभित्र ऊ छचल्किरहेको छ । आफु कत्रो टेन्सनमा छु, ऊ भने ढुक्कसँग हासेर यो बसेको छ ! ’ए भाई रक्सी, तँलाई अलिकति पनि चिन्ता छैन आफ्नो बारेमा ?’
’मेरो कुरो छोडिदेऊ न, आफ्नो बारेमा चाहिँ सोच ।’ मैले ओठछेउबाट ड्ड क्सी हटाउँदै उपदेश दिएँ। ’मेरो बारेमा मलाई नै चिन्ता छैन भने तिमीलाई केको खसखस हँ ?’- गिलासभित्रबाट रक्सी करायो हेर भाइ, क्रान्तिकारी महिलाहरूले रक्सीविरुद्ध आन्दोलन छेड्दैछन् । तिमीहरूको वंशनाश गर्ने रे ।’ मेरो कुरा सुनेर गिलासभित्रको रक्सी पुनः छचल्कियो ’वंशनाश ! हामीले के बिगार गरेका छौं हैं यी मानिसहरूको ?’
रक्सी रिसाएको देखर मैलै सम्झाउँदै भनें- ’कुरो के भने, तिमीहरूले मानिसलाई रोगी बनायौ, सक्रिय हैन भोगी बनायौ । समाजलाई ढोंगी बनायौ रे ।’ ’हामी हात न खुट्टाबिनाका मुर्कुट्टाकार रक्सीहरू, जबर्जस्ती मान्छेका मुखमा पसेका हौं र ? कि हामी फ्याक्ट्रीबाट पाइपद्वारा सिधै तिमीहरूका भुँडीमा घुसेका हौं ?’- रक्सीको गिलासले मलाई हकायो ।
’मैले त्यसो भनेको पनि होइन । तापाईहरूको दुरूपयोग भयो । फ्याक्ट्रीका साहुहरूले तपाईंहरू मार्फत मानिसमा…’ मेरो कुरो काट्दै रक्सी गर्जियो- ’मालिकले गरेको अपराध हामीमाथि किन थोपरिन्छ ?’ म अवाक् भएँ । यसको जवाफ मसँग थिएन । तत्कालै एकजना क्रान्तिकारी महिला मित्रलाई फोन सम्पर्क गरे ’हेलो राँकीताजी, म यहाँ रक्सीको ट्र्यापमा परें । कुरो के भने तपाईंहरूले रक्सीमाथि प्रतिबन्ध लगाउनुभन्दा उत्पादनस्थल नै सिज गरिदिए हुँदैनथ्यो र भन्या ?“ उताबाट उत्तर आएकै थिएन, रिसिभर खोस्दै गिलासले ड्याम्म फोन राखिदियो ।
’सबैजना नाटक गर्छन् । फ्याक्ट्री नै सिज गरिदियो भने उनीहरूलाई कसले चन्दा दिन्छ ।’ आँखा राताराता पार्दै रक्सी जंगियो । ’तिमी पुर्वाग्रही भएर बोल्दैछौ, क्रान्तिकारी महिलाहरूसँग तिम्रो कुनै पुरानो दुस्मनी थियो कि ?’ मैले सोधें। ’रिस उठ्दैन त ? गरीबको विरुद्धमा लड्छु भन्नेहरू, हामी गरीबकै विरुद्ध आइलागेपछि ..’ रक्सी सुँक्कसुँक्क गर्न थाल्यो ।
’तिमी गरीब ? भन्न खोजेको कुरो के हो ? मैले त बुझिनँ है ?’ मैले ओठ लेप्याएँ । ’कारवाही गर्ने भए ह्विस्की र ब्रान्डीहरूलाई गर्नुपर्छ । बिचरा हामी पाँच रूपैयाँ गिलासका रक्सीलाई प्रतिबन्ध लगाएर क्रान्ति हुन्छ ?“ रक्सीले गिलासको वरिपरि लाग्दै गरेको आँसु पुछ्दै भन्यो। हिवस्की भए पनि रक्सी भए पनि आखिर तिमीहरूको जात त एउटै हो क्यारे?“ मैले सोधें ।
’जात एउटै भए पनि हाम्रो वर्ग फरक छ । हामी निगार र रक्सीहरू निम्नवर्गका हौं । भोड्का र रमहरू मध्यमवर्गीय परिवारमा गनिन्छन् । बान्डी र ह्विस्कीहरू धनी परिवारमा पर्दछन् भने रेडलेभल र हवाइटलेभल सम्भ्रान्त परिवार भित्र पर्दछन् ।’ रक्सीले वर्ग विश्लेषण गयो । तिमी निम्नवर्गीय भएर के फरक पन्यो त, अरु मद्यपानभन्दा कम दोषी छैनी । मैले भनें ।
’सबैजना चोर हुन् भनेर आफू भलो हुन खोज्ने काम नगर। तिमी किन रक्सी खान्छौ भन त ?- रक्सीले सोध्यो । ’मैले त दिनभरि भारी बोक्नुपर्छ । डाइट खान पैसा छैन । त्यसैको बदलामा पीडा बिसंन कान्छीको यो पसलमा रक्सी खाने गर्छु ।’ मैले सत्य कुरा बताए। ’हो, यहींनिर भयो गरीबद्वारा गरीवविरुद्ध शोषण के तारे र पाङ्ग्रे होटलका धनी रक्सीहरूमाथि कारबाही हुन्छ ?’ उसले सोध्यो । मैले कुन्निको सङ्केतमा ओट लेप्याएँ । ’यसरी नै जे विषयमा पनि ओठ लेप्याउँदै गयौ भने तिम्रो मुखमुनिबाट हात्तीको झैँ सँढ निस्किएला, तर आफ्नो प्रश्नको उत्तर कहिल्यै पाउने छैनौ बुझ्यौ ? “रक्सीको गिलासले लामो प्रवचन सुनायो ।
’तर, असर त एउटै हो नि तिमीहरूको। के तिमी चाहिँ ठीक छु जस्तो, लाग्छ त ?’ मैले प्रश्न गरें। रक्सी मेरो मुखको छेउमा आयो र भन्यो- ’प्रश्न म ठीक छु वा छैन भन्ने होइन । हाम्रो वंशनाश गर्नेहरू कति प्रतिबद्ध छन् भन्ने हो । साँच्चै परिवर्तनका लागि हो कि सस्तो लोकप्रियताका लागि हो वा धनीको रक्षा र हामी जस्ता गरीब रक्सीको समाप्तिको षड्यन्त्र हो, त्यो थाहा चाहियो ।’
एकैछिन सोची सकेपछि मैले जवाफ दिएँ- ’यो सब थाहा दिन त रूपचन्द्र विष्ट चाहिन्थ्यो, उनी बितिगए। अब कसरी थाहा पाउँनु र ?’ मैले ’तर हेर्नोस्, जबसम्म मानिसहरूका यस्ता अभियानमा इमान्दारिता आउँदैन तबसम्म हाम्रो वंशनाश कसैले गर्न सक्दैन । भट्टीमा रोके भने । रेस्टुराँमा जान्छौं । रेस्टुराँमा छेके भने होटेलमा पस्छौं । होटलमा प्रतिबन्ध भए डिस्कोतिर छिछौं । डिस्कोमा पनि पर्खाल लगाए भने हामी मन्त्री र नेताहरूका सुरक्षित घर र क्वार्टरहरूमा घुसेर हाम्रा धनीवर्गका दाजुभाइले जातीय अस्तित्व जोगाइराख्नेछन्, बुझ्नु भो ?’ रक्सीको चर्को स्वरले म झसङ्ग भएँ ।
मेरो झसङ्गले गर्दा टेबुलमाथिको पानीको गिलास भुईमा खसेर पानी पोखियो । म भिजेको कपडा निचोर्न थालें । के गर्ने यार, जहाँ बस्यो त्यहाँ सपना देख्ने मेरो बानी पनि कहिल्यै गएन भन्या !
मनोज गजुरेल प्रकाशित मिति : वैशाख १०, २०७९
लेख्ने होइन स्रष्टाले कसैलाई रिझाउन
राजधानीकाे महानगरमा मेयर ? काे भन्दा काे कम ??